फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 54 views
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
चालू आव २०७४/७५ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले रू. ७ करोड ३० लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ५ करोड ७६ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा बढेकाले नाफा बढेको हो । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्तापूँजी १ सय १४ प्रतिशतले बढेर रू. ५६ करोड ७७ लाख पुगेको छ । कम्पनीले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेपछि पूँजी बढेको हो । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. १४ करोड ४४ लाख छुट्याएको छ । कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ४६ लाख ४० हजार छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा शून्य रहेको छ । कम्पनी आगामी दिनमा निरन्तर रुपमा गुणस्तरीय थोक लघुवित्त सेवा दिने कार्यमा केन्द्रित रहनेछ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा साझेदार संस्थाहरु मार्फत अधिकतम ऋणीहरुसम्म वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने योजना रहेको छ ।